विश्व Archives - Myagdi Online
बागलुङ, ८ पुस । ‘हेरहेर तिम्रा पुर्खाको सभ्यता कहाँबाट सुरु भयो बुझबुझ तिमी यहाँसम्म आइपुगेको कुन–कुन नदी तर्दै हो ? ’ कवि साम्ब ढकालले ‘नदी भञ्जकहरूका नाममा’ कवितामार्फत यो प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँ सोध्नुहुन्छ, नदीमाथि हुर्केको नदी सभ्यता वेमाख पार्दै आज नदी भञ्जकहरुले विजयोत्सव मनाइरहेछन् नदी भञ्जकहरुलाई एउटा यक्ष... पुरा पढ्नुहोस
पोखरा, २७ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश समितीको प्रथम अधिवेशनबाट गायत्री गुरुङ अध्यक्षमा निर्बिरोध निर्वाचित हुनु भएको छ । माओबादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश कार्यालय सदस्य रहनु भएकी गुरुङको अध्यक्षतामा २८ सदस्य थप्ने गरी २२९ सदस्यीय समिती बनेको हो । गण्डकी प्रदेशको प्रथम अधिबेशनले महिला नेतृत्वमा प्रदेश समिती... पुरा पढ्नुहोस
कार्तिक, २ असोज । म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघ (मोना) अन्तराष्ट्रिय कार्यकारी समितिको चौथो महाधिवेशन मंगलबारदेखि बेनीमा सुरू भएको छ । दुईदिनसम्म संचालन हुने महाअधिवेशन सुरू हुनुभन्दा अघि बेनी बजारमामा झाँकि र वाजागाजा सहित र्‍याली निकालिएको थियो । विभिन्न देशमा ब्यावसाय, रोजगारी, शिक्षाको क्रममा विश्वभर छरिएर रहेका म्याग्देलिहरूको साझा संस्था... पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि क्रिकेटरहरु चिन्तित बनेका छन् । अफगानिस्तान क्रिकेट टिमका कप्तान राशिद खान, मोहमद नाबी लगायतका क्रिकेटरले सामाजिक संजालबाट चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । इंग्ल्यान्डका 'द हन्ड्रेड' क्रिकेट खेलिरहेका स्पिनर राशिदले ट्वीटरबाट देश अराजकतामा रहेको र देशको जनताले शान्ति चाहेको बताएका छन् । 'मेरो... पुरा पढ्नुहोस
लियोनल मेस्सी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) मा अनुबन्धित हुने पक्का
काठमाडौं । अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) मा अनुबन्धित हुने पक्का भएको छ । पीएसजीसँग दुई वर्षे सम्झौताका लागि मेस्सी सहमत भएको स्काई स्पोर्ट्सले जनाएको छ । पीएसजीले मेस्सीलाई २ वर्षको सम्झौता गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै सम्झौता थप गर्नका लागि बिकल्प समेत... पुरा पढ्नुहोस
चैत १५ । बेलायती राजघराना त्याग गरेका राजकुमार ह्यारीले अमेरिकामा नयाँ जागिर सुरु गरेका छन् । क्यालिफोर्नियास्थित सिलिकन भ्यालीको एक नयाँ प्रविधि कम्पनीमा उनले कार्यकारी अधिकृतको जागिर सुरु गरेका हुन् । स्टार्टअप कम्पनी बेटरअपमा उनी चिफ इम्प्याक्ट अफिसरको पदमा भर्ना भएका हुन् । बेटरअप कम्पनी तथा राजकुमार ह्यारीका प्रवक्ता समेतले... पुरा पढ्नुहोस
एजेन्जी चैत १५ गते । प्रजातान्त्रीक व्यवस्थालाई अपदस्त गर्दै सैनिक कु भएको म्यानमारमा ठुलो संख्यामा मानिसहरुको हत्या भैरहेको छ । म्यानमारमा शनिबार मारिएका ११४ जना प्रर्दशनकारीको अन्त्येष्टिमा भाग लिएका मानिसहरुमाथि सुरक्षा बलले गोली चलाएको छ । आइतबार यान्गोन नजिकै बागो टाउनमा आयोजित एक अन्त्येष्टि कार्यक्रममा चलेको गोलीबारीमा के कति क्षती... पुरा पढ्नुहोस
म्याग्दी, १५ कात्तिक । पढाई र रोजगारीको सिलसिलामा अष्टे«लिया रहेका म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका– २ र ३ वडाका युवाहरुले राखु समाज अष्ट्रेलिया गठन गरेका छन् । गत हप्ताको शनिबार राखुबासी युवाहरुको भेलाले सतिस भण्डारीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेका हुन् । समाजको उपाध्यक्षमा शिव रकाल, महासचिवमा पवन कटुवाल, सचिवमा गोकुल भण्डारी,... पुरा पढ्नुहोस
मंगला गाउँपालिकाको गाउँसभामा अध्यक्ष श्री सत प्रसाद रोकाज्यूद्धारा प्रस्तुत् गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को मंगला गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम मंगला गाउँपालिका बाबियाचौर, म्याग्दी ०९ असार, २०७७ गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु ! उपस्थित गाउँपालिकाका उपाध्याक्षज्यू, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरु,गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु,पत्रकारज्यूहरु एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु, विश्वव्यापी महामारीको... पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं – उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग हुने वार्तामा सहभागी हुन सिंगापुर पुगेका छन्। एयर चाइनाको विमानबाट चाङगी विमानस्थलमा ओर्लिएका किमलाई सिंगापुरका विदेशमन्त्री भिभियन बालाकृणनले स्वागत गरेका छन् । विदेशमन्त्री बालाकृष्णन शुक्रबार मात्र प्योङयाङ पुगेका थिए । किम र उनी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सेन्ट रेगिस होटलमा बस्नेछन्... पुरा पढ्नुहोस